NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် Bluefish444 KRONOS K8 အခုတော့သင်္ဘောတင်နေသည်ကြေညာ
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Bluefish444 KRONOS K8 အခုတော့သင်္ဘောဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်
Bluefish444 KRONOS K8 အခုတော့သင်္ဘောဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်
HDR, IMF က / DCP များအတွက် HFR, အသံလွှင့်ရစ်ဖစ်များနှင့်ပိုမိုများအတွက် multi-ရုပ်သံလိုင်း 4K I / O
မြောက်အမေရိကမဲလ်ဘုန်းမြို့သြစတြေးလျ, စက်တင်ဘာလ 13, 2019 - Bluefish444သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းရဲ့အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေး၏ထုတ်လုပ်သူ 4K SDI, asi, ဗီဒီယိုကျော်အိုင်ပီ & uncompressed HDMI I / O ကတ်များနှင့် mini converters အဖြစ်, အကိုကြေညာ KRONOS K8 ဗီဒီယိုကို I / O ကဒ် ရေကြောင်းယခုဖြစ်ပါတယ်။
K8 2K များအတွက်ရှစ်လွတ်လပ်သောလိုင်းများကို support /HDရှစ် 4G-နိုင်စွမ်းနှင့်အတူ / SD နှင့် Multi-ရုပ်သံလိုင်း 3K မြင့်မား dynamic range ကိုနှင့်မြင့်မားသည် frame-rate ကို Workflows, HD-BNC connectors လေးခုရှောင်ကွင်း relays များ, လေးခုပြည်တွင်းရေး keyers နှင့်တိုင်းမောင်းသောတူညီ 12-bit မှာအပြောင်းအလဲနဲ့ Bluefish444 I / O ကဒ် အများဆုံးဗွီဒီယိုအရည်အသွေးသေချာစေရန်။ optional အရန်ဆက်သွယ်မှုမတူနိုင်တဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် analogue အသံပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, linear အချိန်ကုဒ်နှင့်သည် RS-8 I / O ခွင့်ပြု, အ KRONOS K422 မှဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်။
K8 ရဲ့ features တွေကိုပြုလုပ် 12-bit မှာအရည်အသွေး, ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့် SDI ဗီဒီယိုကို I / O ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရာပူဇော်သက္ကာကိုမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးများအတွက်စံပြကဒ်ပါစေ။ post-ထုတ်လုပ်မှု, ဂရပ်ဖစ်ထုတ်လွှင့်, တိုက်ရိုက်လွှထုတ်လုပ်မှု, တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များ, IMF က / DCP အရည်အသွေးအာမခံ SDR နှင့် HDR အဘို့, Multi-ရုပ်သံလိုင်း display ကို, archive ကိုနှင့်ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းနှင့်ကို virtual သို့မဟုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးအမှန်တကယ် Workflows အားလုံး KRONOS K8 ကနေအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်။
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန developer မိတ်ဖက်ထားပြီး Bluefish8 မှတဆင့် K444 မွေးစားခဲ့ကြ Software Development Kit, စက်မှုလုပ်ငန်း-စံ၏နောက်ထပ်ကလေးမွေးစားခြင်းနှင့်အတူ, 3rd-party application ပြီးသားကထောက်ခံ ယုဂ်အကွာအဝေးကနေ software ကိုအပါအဝင် လွန်စွာလိုလားသော, Adobe က, Marquise Technologies က, CasperCG, စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် Medialooksကောင်းစွာဆဲ။
အဆိုပါ K8 နှင့်အတူအခမဲ့ကို bundle ကောင်းပါသည် IngeSTore Multi-ရုပ်သံလိုင်းဖမ်းယူနှင့်များအတွက် software ကို Bluefish444 SDK ကို KRONOS နှင့်အတူပေါင်းစည်းလိုသော developer များအဘို့။ လာမည့် Bluefish444 ဆော့ဖ်ဝဲ, IngeSTreamလည်း Multi-ရုပ်သံလိုင်းမှ streaming များအတွက် K8 နှင့်အတူကို bundle ပါလိမ့်မည် SMPTE 2022 / 2110, RTP နှင့် NewTek NDIⓇ နောက်ပိုင်းမှာ 2019 အတွက်၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်အပေါ်သို့ protocols များ။
Bluefish444 အဆိုပါသရုပ်ပြပါလိမ့်မည် KRONOS K8 ဗီဒီယိုကို I / O ကဒ် ရပ်တည်ချက်အပေါ် 7.B44 at IBC ပြရန် 2019, နှင့် 4K HDR ကို IMF ကအရည်အသွေးကိုအာမခံချက် ပလေးအောက်လုပ်ငန်းအသွားအလာ featuring Marquise Technologies က'' ICE နှင့် အနိမ့်-အောင်းနေချိန် 4K / UHD SDI I / O ဂရပ်ဖစ်လုပ်ငန်းအသွားအလာထုတ်လွှင့်။ ဤအများနှင့်အခြားအကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာမည် ဤနေရာတွင် IBC Show ကိုပို့လိုက်ကြတယ်.
K8 ယခုဝယ်ယူမှုများအတွက်ရရှိနိုင်မှာရရှိနိုင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူအမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 3,495 မှာစတင်သည် bluefish444.com or ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားမှတ်ပုံတင်ရန်.
Bluefish444, စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေး compressed လုပ်မထားတဲ့ KRONOS နှင့်ယုဂ် 4K / UHD, 12G / 3G ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ် HD/ SD က SDI, asi, ဗီဒီယိုကျော်အိုင်ပီ & HDMI I / O ကတ်များနှင့် synapses mini ကို converters ။
Bluefish444 ဝတ်ပြုရေးကော်ပိုရိတ်, အိမ်တော်အဘို့မျိုးစုံဖမ်းမိခြင်းနှင့်ပလေးအောက်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြစ်နိုင်ခြေ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအဖြစ်အပျက်, Display, တင်ပြချက်, အပြန်အလှန်မီဒီယာနှင့်ပိုပြီးဖွင့်, ရောနှောအသုံးပြုသူများနှင့် 3rd ပါတီထုတ်လုပ်သူများအတွက်ပညာရှင်များ '' ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ကထုတ်လွှင့်, အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, & Post-ထုတ်လုပ်မှု pedigree ဖြစ်စေသောတစ်ဦးကယုံကြည်စိတ်ချရသော, အရည်အသွေးမြင့်အမှတ်တံဆိပ်။ Bluefish444 ဟာ့ဒ်ဝဲ, Adobe ကနှင့်အတူပေါင်းစပ်ခြင်းရှိပါတယ် လွန်စွာလိုလားသောအတူစည်းလုံးညီညွှတ်ရေး, Unreal Engine ကို, CasparCG နှင့်မိတ်ဖက် Vizrt, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ, ClassX, NewTek NDI နှင့်အများအပြားကပို။
Bluefish444 အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအဆိုပါ IngeSTore Multi-ရုပ်သံလိုင်းဖမ်းယူလျှောက်လွှာ, SDI ၏ထိရောက်သောမှတ်တမ်းတင်ခွင့်ပြု HDMIနှင့် 2110 / 2022 သတင်းရင်းမြစ်။ Bluefish444 ရဲ့အခမဲ့ Cross-platform SDK ကိုထုံးစံ applications များနှင့်အတူ Bluefish444 IO ၏ low-level ပေါင်းစည်းမှုခွင့်ကို Microsoft Windows, Apple က MacOS နှင့် Linux operating system များပေါ်တွင်ထောက်ခံသည်။ DirectShow, V3L4, ASIO, Medialooks, NVIDIA CUDA, GPUDirect နှင့် AMD ၏ DirectGMA နှင့်အတူ 2rd ပါတီ API ကိုထောက်ခံမှုပါဝင်သည်။
Bluefish444 KRONOS K8 အခုတော့သင်္ဘောဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ် - စက်တင်ဘာလ 13, 2019
Bluefish444 IngeSTore ဖို့ပို features တွေနဲ့ Edit-နေစဉ်-Record updates များကိုဖြည့်စွက် - သြဂုတ်လ 6, 2019
Bluefish444 Unreal Engine ကိုဖြင့် Video I / O ပေါင်းစည်းမှုကြေညာ - ဧပြီလ 4, 2019
လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-09-13
ယခင်: IBC 3.5 မှာတွေ့ဆုံ Frame.io v2019
နောက်တစ်ခု: ACCESS နှင့်နောက်မျိုးဆက်တီဗီနှင့်ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုများကိုရိုးရှင်းဖို့ EKT မိတ်ဖက်